आफ्नै लागि आश्रम बनाउने दाउमा रहेका ‘महाराज’ कहाँ छन् ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आफ्नै लागि आश्रम बनाउने दाउमा रहेका ‘महाराज’ कहाँ छन् ?
महायज्ञमा अनुपस्थित रहेका भण्डारी लुकेर बसेका छन् । केही वाचकले आफू अलग भएको घोषणा गरेका छन् भने आयोजकमध्ये केहीले भण्डारी अझै उपस्थित हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
माघ १५, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — चितवन सदरमुकाम भरतपुर बजारबाट झन्डै २० किलोमिटर पश्चिम भरतपुर–२३ जगतपुरमा पशुपतिनाथ मन्दिर छ । मन्दिरको व्यवस्थापन समितिले नै गत शनिबारदेखि नारायणी नदी किनारमा २५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेर एकमहिने महायज्ञको आयोजना गरेको छ ।
कहिले आफूलाई विष्णु प्रपन्नाचार्य त कहिले बालयोगेश्वर महाराज बताउने ठगी काण्डमा मुछिएका विजय भण्डारी महायज्ञको मुख्य वाचक भएको तथ्य खुलेपछि महायज्ञ नै विवादमा परेको छ । उद्घाटन गर्ने भनेर शुक्रबार नै चितवन आएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन फर्किएपछि महायज्ञको रौनक त्यसै हराएको छ ।
यज्ञ आयोजक समितिका उपसंयोजक मनोज पुडासैनी एक वर्षयता मन्दिरको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छन् । उनका अनुसार फिल्डबुकमा दर्ता कायम भएको २ बिघा १५ कट्ठा र डेढ बिघाजति ऐलानी जग्गा पनि मन्दिरले नै संरक्षण गर्दै आएको छ । मन्दिरका नाममा पुर्जा नभए पनि परिसरमा आश्रम बनाउने र त्यसको हर्ताकर्ता आफैं बन्ने मनसुवाले भण्डारीले व्यवस्थापन समितिलाई यज्ञ आयोजना गर्न सहमत गराएका हुन् ।
महाराजको ठगी धन्दा : पुराना फकाउँदै नयाँ ठग्दै
समितिका एक सदस्यले पुर्जा नभएको जग्गामा भण्डारीले आँखा गाडेको बताए । मन्दिर भएको क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने तयारी भइरहेका बेला समितिको सम्पर्क ‘महाराज’ सँग भएको देखिन्छ । अध्यक्ष पुडासैनीले भने, ‘पोहोर पटिहानीको भानु माविमा आएर ‘महाराज’ ले यज्ञ गर्नुभयो । त्यही बेला मन्दिर समितिका सल्लाहकार दिलीप न्यौपानेबाट महाराजसँग हाम्रो सम्पर्क भयो ।’ नेकपाका जिल्ला तहका नेता न्यौपाने यतिबेला यज्ञ आयोजक समितिका महासचिव तथा प्रवक्ताको भूमिकामा छन् ।
मन्दिर परिसरलाई धाम बनाउने, आयुर्वेदिक शिक्षालय खोल्ने योजना वडा भेलाबाटै बनेको अध्यक्षले बताए । उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रो कोष र स्थानीय तहको बजेटले पनि भेट्दैन । बालयोगेश्वरजीले यज्ञ गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने, उहाँले यही आश्रम नै बनाएर संरक्षण गर्ने भनेपछि किन नदिने ?’
समितिका महासचिव तथा प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘उहाँको आश्रम त्यहाँ रहने भन्ने हो । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आश्रम बनाएर चार/पाँच सय जनालाई खाना खुवाएर सुताउन मिल्ने आश्रम बनाउने योजना पनि हो ।’ दिलीपकै भनाइबाट ‘महाराज’ बालयोगेश्वर महायज्ञको रकमबाट आफू बस्ने आश्रम बनाउन चाहन्थे भन्ने बुझिन्छ । त्यसो त भण्डारीले यसअघि नवलपरासीको कावासोतीस्थित राधाकृष्ण धाम र कपिलवस्तुको लक्ष्मणघाटस्थित बोलबम धाममा पीठाधीश्वर बनेका थिए । आर्थिक अपचलन र ठगीका विभिन्न घटनामा जोडिएपछि उनी दुवै ठाउँबाट निकालिए । त्यसैगरी, अमेरिकामा महायज्ञ गर्ने भन्दै विभिन्न जिल्लाका सयौं व्यक्तिबाट पैसा उठाउँदै गर्दा ‘महाराज’ ले मानव कल्याण आध्यात्मिक परोपकार संघका नाममा पर्चा छपाएर बाँडेका थिए । पीडितहरूबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पर्चाको अन्त्यमा उनी दुवै धामको पीठाधीश रहेको उल्लेख छ ।
लक्ष्मणघाटका स्थानीय मोहन बेल्बासेका अनुसार भण्डारीले कसैलाई नसोधी गलत जानकारी राखेर पर्चा छपाएका थिए । उनले भने, ‘ठगीधन्दा चलाउन त्यस्तो गरेका रहेछन् ।’ २०६८ को अन्ततिर कावासोतीस्थित नर्मदेश्वर शिवालय मन्दिरको व्यवस्थापन समितिलाई फकाएर भण्डारी पीठाधीश भएका थिए । तत्कालीन मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नीलकण्ठ बस्ताकोटीका अनुसार भण्डारीले अमेरिका लैजाने भन्दै मान्छेहरू ठगेको सूचना आएपछि व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकेर पीठाधीशबाट हटाइएको थियो । बस्ताकोटीले भने, ‘महाराजले आफ्नाबारेमा बताएका धेरै कुरा फर्जी देखिएपछि हामीले बैठक गरेर निकाल्ने निर्णय गर्‍यौं ।’
दुवै ठाउँबाट निकालिएका महाराज २०६९ कात्तिक १४ मा गुल्मीको तम्घासमा पक्राउ परे । केही समय जेल बसेर निस्केका उनी फेरि २८ पीडितले उजुरी हालेपछि पक्राउ परे । त्यसपछि उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा २०७१ असोज ६ देखि २०७३ चैत ४ सम्म केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा कैद सजाय भुक्तान गरे । जेलबाट निस्केपछि उनले विष्णु प्रपन्नाचार्यको नाम फेरेर आफूलाई बालयोगेश्वर महाराज घोषणा गरे । उनकै एक नातेदारका अनुसार जेलबाट निस्केपछि उनको एउटै ध्याउन्न थियो, आफ्नै आश्रम बनाउने वा कुनै धामको पीठाधीश बन्ने । जेलबाट निस्किएपछि उनले विभिन्न ठाउँमा यज्ञ, होम र धान्याचल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
आफ्ना नाममा बालयोगेश्वर फाउन्डेसन खोलेका उनले कर्मचारीलाई आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सरकारी विद्यालयमा पठाउँथे । अनि महायज्ञ लगाउने र उठेको रकमको हिस्सा आफूले लिने सर्तमा काम अघि बढाउँथे । वैशाख ३–१३ मा फर्पिङको त्रिभुवन आदर्श आवासीय माविका प्रधानध्यापक नवीन अमात्यका अनुसार उक्त फाउन्डेसनको कर्मचारी बताउने चिरञ्जीवी अधिकारीले विद्यालयसँग महायज्ञ लगाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए । अमात्यले भने, ‘३५ लाख जति उठेको थियो । महाराजले यज्ञ खर्च र आफ्नो पारिश्रमिक भनेर झन्डै २३ लाख लगे ।’
यज्ञ समापन समारोहका दिन विद्यालयले उनलाई गाडीमा राखेर नगर परिक्रमा पनि गराएको थियो । तर परिक्रमा सकेर काठमाडौं फर्कंदै गर्दा उनी फेरि पक्राउ परे । डिल्लीबजार कारागारको अभिलेखअनुसार उनी वैशाख १३ देखि ३१ गतेसम्म कैद बसेको देखिन्छ ।
कहाँ छन् ‘महाराज’
ठगीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि ‘महाराज’ ले सोमबारदेखि पुराण भन्न छाडेका छन् । चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा आयोजित यज्ञ स्थलमा मंगलबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक समितिका मुख्य पदाधिकारी सहभागी भए पनि ‘महाराज’ उपस्थित भएनन् । ठगीको दर्जनौं घटनामा नाम मुछिए पनि उनी आफ्नो भनाइ राख्न आएनन् । केही स्थानीय सञ्चारमाध्यमले ‘महाराज’ फरार भएका बताए पनि आयोजकले त्यसको खण्डन गरेको छ । तत्कालीन एमाले निकट युवा संगठनको आठ वर्ष जिल्ला अध्यक्ष भएका प्रवक्ता दिलीप न्यौपानेले आक्रोशित शैलीमा भने, ‘तर कति पत्रकारले के कुराले फरार हुनुभो भनेर लेखे । के कारणले फरार हुनुपर्‍या छ ?
किन डराउनु पर्‍या छ ? को सँग डराउनु पर्‍या छ ?’ पत्रकारले ‘महाराज’ कहाँ छन् भनेर गरेको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । कान्तिपुर स्रोतका अनुसार महाराज चितवनमै लुकेर बसेका छन् । नजिकका केही नातेदारबाट प्राप्त नम्बरमा फोन गर्दा दिनभर मोबाइल स्विच अफ थियो । न्यौपानेले ‘महाराज’ केही बेरमा आउन सक्ने वा नआउन पनि सक्ने बताएका थिए । कान्तिपुरको जिज्ञासामा भने उनले भने, ‘हामी महाराजलाई नै राखेर केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्छौं ।’ आयोजक समितिका एक सदस्यले भने महाराज आफूविरुद्ध लागेका आरोप खण्डन गर्न प्रमाण खोज्न निस्केका दाबी गरे । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका सुरक्षा अधिकारीले भने उनी चितवनमै रहेको तर सार्वजनिक वृत्तमा देखिँदा जुनसुकै बेला पक्राउ परिने डरले लुकेको दाबी गरे ।
गुरुको गल्ती ठूलो छैन : वाचक
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका वाचकमध्येका एक शेखर शर्मा पौडेलले महायज्ञको उद्घाटन गर्न आएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन समाचार पढेकै भरमा उद्घाटन नगरी फर्कनु हिन्दु धर्ममाथिकै अपमान भएको आरोप लगाए । आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका उनले उपराष्ट्रपतिप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘उद्घाटन नै नगरी जानु यो कस्तो कार्य हो ? यो कस्तो धर्म हो ? कस्तो देश हो ?’ हत्या आरोप लागेका व्यक्तिहरू देशकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेको हुँदा गुरुको गल्ती ठूलो नभएको उनको भनाइ छ ।
उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव मिलन डाँगीले उपराष्ट्रपतिले ‘संवैधानिक अंगको गरिमा कायम गर्न विवादित कार्यक्रममा सहभागी नहुनुभएको’ बताए । उपराष्ट्रपतिप्रति आक्रोशित भएका पौडेलले भने महाराजको विवादित पृष्ठभूमिका बचाउ गरे । महायज्ञ आयोजक समितिका सल्लाकार संयोजक नारायणप्रसाद आचार्य र उपसंयोजक दिव्य शर्मा आचार्यले प्रमुख वाचकप्रति उठेका विषयमा छानबिनको माग गर्दै यज्ञ आयोजक समितिबाट बाहिरएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पण्डित शेखर शर्मा पौडेलले व्यक्त गरेको विचारप्रति आफूहरूले खेद व्यक्त गर्ने बताउँदै यज्ञमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
ठगिनेमा एकै गाउँका ७ जना
आफूलाई बालयोगेश्वर महाराज बताउने गुल्मीका विजय भण्डारीले साविक महेन्द्रज्योति गाविस–८ का ७ जनालाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको पाइएको छ । यज्ञ लगाउने नाममा गाउँ छिरेका उनले थोरै रकममा अमेरिका पठाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर ठगी गरेका हुन् । ‘इन्डिया हुँदै अफ्गानिस्तान जान लाग्दा म फसेको थिएँ, उनलाई त्यही भेटेको हुँ,’ महेन्द्रज्योति गाउँका राजाराम कार्कीले भने, ‘मसँग चिनजानका आधारमा गाउँ आएँ तर मलाई नै १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा फसाए ।’ छोरी सिर्जनालाई अमेरिका पठाइदिने भनेपछि उनले बुझाएको रकम फिर्ता भएन । ‘उनीसँग घुमे तर मलाई नै फसाए, गाउँमा चिनजानका अरूलाई पनि फसाएछन्,’ कार्की भन्छन्, ‘पहिला उनलाई समाएर थुनेका पनि हौं तर सधैं उसको पछाडि लाग्न आर्थिक अवस्थाले पनि नसकिने भएपछि हामीले छोडिदियौं, उसले ठगेका धेरै होलान् ।’
महेन्द्रज्योतिबाट सिर्जनासँगै भगवान कार्की, श्रीकृष्ण कार्की, रोजिना कार्की, रवीन्द्र रावल र नवराज कार्कीले १ लाख ५० हजार रकम बुझाएका थिए । कसैको पनि पैसा फिर्ता भएको छैन । राजारामका भाइ नवराज कार्कीले पनि विदेशमा रहँदा नै दाइमार्फत १ लाख ५० हजार दिए । ‘म वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मलेसिया थिए, डेढ लाख लाग्छ भनेपछि दाइलाई नै हालिदिनुस् भने,’ नवराज भन्छन्, ‘आफूले बोलेको भएर दाइलाई फिर्ता गरे तर उसबाट फिर्ता गर्न सकेनौं ।’ २०७१ मा नेपाल फर्किएका उनी त्यसयता गाडी चलाउँदै आएका छन् । गाउँका धेरै जनाको पैसा फसेपछि उनीहरूले भण्डारीलाई समातेर प्रहरीमा बुझाए । ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि पैसा फिर्ता भएन ।
पोखरा–काठमाडौं गर्न लागेको थाहा भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा कुरेर बस्यौं,’ भण्डारीलाई एक लाख बुझाएका महेन्द्रज्योतिकै श्रीकृष्ण कार्की भन्छन्, ‘त्यहाँबाट पनि उम्किन खोजेका थिए, हामीले गौशाला प्रहरीलाई बुझाइदियौं । गौशालाले हनुमानढोका बुझाएपछि अदालतको आदेशले जेल चलान भएका हुन् ।’
श्रीकृष्णका अनुसार पैसा बुझाए पनि विदेश उड्न ढिला भएपछि उनले भण्डारीलाई पटकपटक ताकेता गरेका थिए । ‘पैसा बुझाएपछि उनले हामीलाई एक वर्ष झुलाए, सक्कली नै जस्ता कागजपत्र देखाउँथे, चिन्ता नलिनुस् ४० जनाको समूह एकैपटक उडाउने हो भनेपछि विश्वासमा पर्दै आयौं,’ श्रीकृष्ण भन्छन्, ‘न विदेश उडाए न पैसा फिर्ता पाइयो ।’ जेल चलान भएपछि भण्डारी उनीहरूसँग रिसाए । ‘हाम्रो एक दुई लाखको मात्रैको कुरा थिएन, सबैको गरेर डेढ–दुई करोड ठगी गरे,’ श्रीकृष्ण भन्छन्, ‘बरु जेल बस्छु तिमीहरूको पैसा फिर्ता गर्दिन भनेछन् । त्यसपछि पैसा आउने आशा मार्‍यौं । फेरि पत्रिकामा समाचार आएपछि चासो लिएका हौं ।’
अमेरिकाका हुने धार्मिक कार्यक्रममा लैजाने भन्दै कपिलवस्तुको लक्ष्मणघाटका युवालाई पनि महाराजले झुक्याएको पाइएको छ । २०७० सालतिर धार्मिक र सामाजिक गतिविधि गर्ने भन्दै लक्ष्मणघाट आएर युवालाई एकत्रित गर्न प्रयास गरेका थिए । स्थानीय हुमनाथ भट्टराईले त्यतिबेला अमेरिका जान पाईन्छ भनेपछि युवाहरू ‘महाराज’ को पछि लागेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय युवासँग महाराजले जनही ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । ठगिएको चाल पाएर केहीले ‘महाराज’को घरै पुगेर पैसा मागेका थिए । उनका अनुसार पैसा नपाएर केहीले त घरको टीभी पनि उठाएर ल्याएका थिए ।
७२ लाख नपाएर समाचार लेखेको आरोप
चितवन- महायज्ञ आयोजक समितिका महासचिव तथा प्रवक्ता दिलीप न्यौपाने पत्रकार सम्मेलनका क्रममा निकै आक्रोशित देखिए । महाराजको बचाउमा उत्रेका उनले कान्तिपुरमाथि गम्भीर आरोप लगाए । ‘तीन दिन अगाडि उहाँहरूको बार्गेनिङ चलेको थियो । ७२ लाख रुपैयाँ हामीले पाउनुपर्छ भन्या’ छन् । ७२ लाख रुपैयाँ नपाएपछि भोलिपल्ट यो समाचार आको छ,’ उनको आरोप छ । कुन मितिमा, कसले र कहाँ पैसा मागेको हो र त्यसको कुनै प्रमाण आयोजकसँग छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने उनले दिन सकेनन् । उनले भने, ‘हामीले कुनै प्रमाण राखेका छैनौं । किनकि हामीलाई यस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा भएन ।’
७२ लाख मागिएको प्रमाण पेस गर्न गरिएको प्रश्नमा भने उनले महाराजले आफूलाई त्यस्तो सुनाएको र यसको प्रमाण नभएको भन्दै पन्छिए । गुरुले गल्ती गरेको हो भने जेल पनि हाल्नुपर्ने चुनौती दिएका उनले अधिकांश समय पत्रकारप्रति आक्रोश पोख्नमै खर्चिए । उनले महाराजबारे समाचार लेख्ने एक अनलाइनप्रति पनि आक्रोश पोख्दै उक्त अनलाइनलाई निस्तेज पार्ने धम्कीसमेत दिए । महायज्ञ आयोजक समितिका अध्यक्ष लालबहादुर दवाडीले स्पष्टीकरणको शैलीमा वाचक ‘बालयोगेश्वर’ को समर्थन पनि नगर्ने र विरोध पनि नगर्ने बताए । ‘उहाँका बारेमा छानबिन हुनुपर्छ । सत्य भए कारबाही हुनुपर्छ । उहाँले कुकृत्य गरेको हो भने उहाँ को हो र कारबाही नगर्ने’ दवाडीले भने ।
रमेशकुमार पौडेल (चितवन), नगेन्द्र अधिकारी (काभ्रे), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु) को सहयोगमा ।
'महाराज' को ठगी धन्दाबारे कान्तिपुरमा शृंखलाबद्ध प्रकाशित समाचार -
१. महाराजको आवरणमा ठगी
२. ठग ‘महाराज’ नेतृत्वकाे कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति सहभागी नहुने
३. ‘महाराज’ को ठगी धन्दा : यसपल्टको लक्ष्य २५ करोड
४. महाराजको ठगी धन्दा : पुराना फकाउँदै नयाँ ठग्दै
५. ‘महाराज’ विरुद्ध ठगी मुद्दाको चाङ
प्रकाशित : माघ १५, २०७६ १०:३४
बाँके — उनलाई प्रेममा जबर्जस्ती हुँदैन भन्ने विश्वास थियो । तीन महिनाअघि भारतदेखि पुर्ख्यौर्ली घर आउँदा उनका छिमेकी नवीन रोकायसँग चिनजान भयो । भेट भएको एक सातामै युवकले प्रेम प्रस्ताव राखे । आफू दलित समुदायकी भएकाले विवाह सम्भव नहुने भन्दै प्रेम अस्वीकार गर्दै आइन् ।
परिवारले नस्वीकारे पनि म अपनाउँछु भन्दै फकाउन थाले । परिचय गाढा भएपछि घुम्न जान दबाब दिए । ‘खुला चौरमा जाऊँ भन्दा मान्थेन,’ उनले भनिन्, ‘जबर्जस्ती जंगलमा लग्यो ।’ बैजनाथकी १८ वर्षीयाले चार महिनाअघि आफूमाथि बलात्कार भएको बताइन । गाभरको जंगलमा लगेर बैजनाथ गाउँपालिका–१ का रोकायले गोप्य अंग चलाउन थाले ।
‘छि के गरेको यस्तो नगर्नु, मैले पटक–पटक इन्कार गरें,’ पीडित युवतीले भनिन्, ‘म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्यो ।’ नाइनास्ती गर्दा भुइँमा धकेलेर जबर्जस्ती गरेको उनले सुनाइन् । ‘टाउको भुइँमा बजारियो, शरीरमा काँडाले घोच्दासमेत छोडेन,’ उनले भनिन्, ‘माया गर्छु भन्थ्यो, जबर्जस्ती गर्‍यो ।’ महिनावारी रोकिएपछि कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा बिहीबार बलात्कार मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् ।
इलाका प्रहरीका डीएसपी कुलदीप चन्दले मुद्दा दर्ता भएको र प्रमाण खोज्न थालिएको बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा आउनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अभियुक्त फरार छ ।’ बलात्कार खुलासा भएपछि पीडित परिवारलाई मिलापत्रका लागि दबाब आएको छ ।
प्रकाशित : माघ १५, २०७६ १०:३०